ဆရာမလေးတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့အခါ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု - POPPIN NEW
ဆရာမလေးတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့အခါ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု
September 14, 2019 ဗဟုသုတ
ဆရာမလေးတွေဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရင် ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှနေကြသူတွေလို့ ခံစားရတယ်မို့လား။ ဆရာမဝတ်စုံလေးနဲ့၊ ဆွဲခြင်းတောင်းလေးကိုင်ပြီး၊ ကျက်သရေရှိလွန်းတဲ့ ဆရာမလေးတွေလည်း အများကြီးပဲလေ။ တချို့ကတော့ ဆရာမလေးတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ကလေးတွေကို ဆူသလိုမျိုး အဆူခံရမယ်၊ ပူညံပူညံလုပ်ကြမယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာလည်း သူတို့ကောင်းကွက်လေးတွေနဲ့သူတို့ပါ။ အဲဒီအချက်လေးတွေကိုသာ သိထားရင် နောက်ဆို ဆရာမလေးတွေကိုပဲ ကြိုက်ဖို့ စဉ်းစားတော့မှာ သေချာသလောက်ပါပဲ….
(၁)။ သူတို့က စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တယ်
ဆရာမတွေဆိုတာ တခြားသူတွေအပေါ် ပညာတွေ မျှဝေပေးရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခုခုဆို စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်ကြပါတယ်။ မမှားသင့်တဲ့အရာတွေ မမှားရအောင် ထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်၊ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်။ သူတို့နဲ့သာ ချစ်သူဖြစ်ရင် သင့်ဘဝမှာ အမှားကြီးကြီးမားမား လုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တောင် မထင်ဘူး။
ဆရာတွေဆိုတာ စေတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ ဆိုတဲ့ နာ(၃)နာ နဲ့ စာသင်ပေးကြသူတွေမဟုတ်လား။ သူတို့က ကိုယ်ရဖို့ထက် ကိုယ့်ဆီက ပေးဖို့ကိုပဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီး နူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ရှိကြသူတွေပါ။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုရင်နူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ပိုင်ရှင်လေးတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရမှာမို့ သင်က အချစ်မှာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်။
(၃)။ သူစာသင်ပေးနေရတဲ့ ကလေးတွေလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်လိမ့်မယ်
ဆရာမလေးတွေဆိုတာက ကလေးတွေကို စာသင်ပေးနေရသူတွေဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိထားပြီးသားတွေနော်။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် သင့်ကို ဂရုမစိုက်ပဲနေမှာမျိုး၊ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အလေးမထားတာမျိုး သူတို့က ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဂရုစိုက်လွန်းလို့တောင် မနေတတ် မထိုင်တတ်တွေ ဖြစ်နေရလိမ့်ဦးမယ်။
(၄)။ တစ်ဖက်သားနားဝင်အောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်
သူတို့က သူတို့တပည့်တွေကို ဆုံးမနေကြဆိုတော့ တစ်ဖက်သားနားဝင်အောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ကိုယ်က မဟုတ်တာ တစ်ခုခုလုပ်ထားလို့ သူတို့က ပွဲကြမ်းမယ့်သူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာရဲ့ အကျိုးတွေ၊ အပြစ်တွေကို အေးအေးဆေးဆေးထောက်ပြပြီးဆွေးနွေးပေးမယ့် သူမျိုးတွေ။
(၅)။ သူတို့က ကိုယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ထက် သူတပါးပျော်ရွှင်ဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးတတ်သူတွေ
ဆရာမလေးတွေ မြင်ဖူးတယ်မို့လား။ သူတို့ရဲ့တပည့်တွေ စာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ရင် သူတို့အောင်သလိုမျိုး ပျော်နေတတ်သူတွေလေ။ သူတို့က ကိုယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ထက် သူတပါးပျော်ရွှင်ဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ။ ဒီတော့ သူတို့ကြောင့် သင်ပျော်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်း မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။
ဆရာမလေးတှဆေိုတာ ကွညျ့လိုကျရငျ ယဉျယဉျလေးနဲ့ လှနကွေသူတှလေို့ ခံစားရတယျမို့လား။ ဆရာမဝတျစုံလေးနဲ့၊ ဆှဲခွငျးတောငျးလေးကိုငျပွီး၊ ကကျြသရရှေိလှနျးတဲ့ ဆရာမလေးတှလေညျး အမြားကွီးပဲလေ။ တခြို့ကတော့ ဆရာမလေးတှနေဲ့ ခဈြသူဖွဈရငျ ကလေးတှကေို ဆူသလိုမြိုး အဆူခံရမယျ၊ ပူညံပူညံလုပျကွမယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ တကယျတော့ အဲဒီလိုမဟုတျပါဘူး။ သူတို့မှာလညျး သူတို့ကောငျးကှကျလေးတှနေဲ့သူတို့ပါ။ အဲဒီအခကျြလေးတှကေိုသာ သိထားရငျ နောကျဆို ဆရာမလေးတှကေိုပဲ ကွိုကျဖို့ စဉျးစားတော့မှာ သခြောသလောကျပါပဲ….
(၁)။ သူတို့က စဉျးစားခငျြ့ခြိနျတတျတယျ
ဆရာမတှဆေိုတာ တခွားသူတှအေပျေါ ပညာတှေ မြှဝပေေးရတဲ့သူတှဖွေဈကွလို့ သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး တဈခုခုဆို စဉျးစားခငျြ့ခြိနျတတျကွပါတယျ။ မမှားသငျ့တဲ့အရာတှေ မမှားရအောငျ ထိနျးညှိပေးနိုငျတယျ၊ ဘာကိုပဲဖွဈဖွဈ အလှနျအကြှံမဖွဈအောငျ ထိနျးညှိပေးနိုငျတယျ။ သူတို့နဲ့သာ ခဈြသူဖွဈရငျ သငျ့ဘဝမှာ အမှားကွီးကွီးမားမား လုပျဖွဈလိမျ့မယျလို့တောငျ မထငျဘူး။
ဆရာတှဆေိုတာ စတေနာ၊ ဝါသနာ၊ အနဈနာ ဆိုတဲ့ နာ(၃)နာ နဲ့ စာသငျပေးကွသူတှမေဟုတျလား။ သူတို့က ကိုယျရဖို့ထကျ ကိုယျ့ဆီက ပေးဖို့ကိုပဲ အဆငျသငျ့ဖွဈနကွေသူတှဖွေဈပွီး နူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ရှိကွသူတှပေါ။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ခဈြသူဖွဈပွီဆိုရငျနူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ပိုငျရှငျလေးတှနေဲ့ ခဈြသူဖွဈရမှာမို့ သငျက အခဈြမှာ ပိုပွီး ပြျောရှငျရပါလိမျ့မယျ။
(၃)။ သူစာသငျပေးနရေတဲ့ ကလေးတှလေိုမြိုး ကိုယျ့ကိုဂရုစိုကျလိမျ့မယျ
ဆရာမလေးတှဆေိုတာက ကလေးတှကေို စာသငျပေးနရေသူတှဆေိုတော့ လူတဈယောကျကို ဘယျလို ဂရုစိုကျရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိထားပွီးသားတှနေျော။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ခဈြသူဖွဈရငျ သငျ့ကို ဂရုမစိုကျပဲနမှောမြိုး၊ သငျ့ရဲ့စိတျခံစားခကျြကို အလေးမထားတာမြိုး သူတို့က ဘယျတော့မှ လုပျမှာမဟုတျဘူး။ ဂရုစိုကျလှနျးလို့တောငျ မနတေတျ မထိုငျတတျတှေ ဖွဈနရေလိမျ့ဦးမယျ။
(၄)။ တဈဖကျသားနားဝငျအောငျ ဘယျလိုပွောရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိတယျ
သူတို့က သူတို့တပညျ့တှကေို ဆုံးမနကွေဆိုတော့ တဈဖကျသားနားဝငျအောငျ ဘယျလိုပွောရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိတယျ။ ကိုယျက မဟုတျတာ တဈခုခုလုပျထားလို့ သူတို့က ပှဲကွမျးမယျ့သူမြိုးတှမေဟုတျဘူး၊ ကိုယျလုပျခဲ့တာရဲ့ အကြိုးတှေ၊ အပွဈတှကေို အေးအေးဆေးဆေးထောကျပွပွီးဆှေးနှေးပေးမယျ့ သူမြိုးတှေ။
(၅)။ သူတို့က ကိုယျပြျောရှငျဖို့ထကျ သူတပါးပြျောရှငျဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးတတျသူတှေ
ဆရာမလေးတှေ မွငျဖူးတယျမို့လား။ သူတို့ရဲ့တပညျ့တှေ စာမေးပှဲကို အမှတျကောငျးကောငျးနဲ့အောငျရငျ သူတို့အောငျသလိုမြိုး ပြျောနတေတျသူတှလေေ။ သူတို့က ကိုယျပြျောရှငျဖို့ထကျ သူတပါးပြျောရှငျဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးတတျတဲ့သူမြိုးတှပေါ။ ဒီတော့ သူတို့ကွောငျ့ သငျပြျောရလိမျ့မယျဆိုတာလညျး မွကွေီးလကျခတျမလှဲပါပဲ။